Dhageyso: Qaabka uu weerarka xarunta UNDP lagu qaadey u dhacey – idalenews.com
Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen, ka dib markii maanta ay rag hubeysan oo ka tirsan kooxda Alshabaab ay weerar ku qaadeen Xarunta Hay’adda UNDP ee magaalada Muqdisho.
Warbixin iyo wareysi ku saabsan weerarka Al-Shabaab ay ku qaaday Xarunta UNDP ee magaalada Muqdisho halkan hoose ka dhageyso
Wasiirka Arrimaha Gudahaee Soomaaliya, Cbdikariin Xuseen Guuled ayaa sheegay in 15-ka qof ee dhintay ay ku jiraan 4 ajanabi ah. Warar ayaa sheegaya in afarta ajaanabiga ay kala yihiin 3 u dhashay Koonfurta Afrika iyo hal qof oo Kenyan ah.
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay ciidamada dowladdu ay gabi ahaanba la wareegeen ammaanka dhismaha xarunta hay’adda UNDP, kaasi oo markii hore ay qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Qaramada Midoobey, Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya ayaa canbaareeyey weerarka lagu qaaday xarunta hay’adda Qaramada Midoobay ee mgaalada Muqdisho.
Mas’uuliyadda weerarka ayaa waxaa sheegtay Ururka al-Shabaab
Ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa maleeshiyada Alshabaab ka saaray magaalada Muqdisho muddo haatan laga joogo laba sano, hase ahaate waxa ay kooxdu weerarro iyo qaraxyo si joogta ah uga geystaa magalaada, iyadoo dhawaan weerar ay soo qaadeen ay gudaha ugu dhaceen dhismayaasha xarunta Maxkamadaha Qaranka ee Muqdisho.
Maydad kale oo laga soo saarey xarunta UNDP ku laheyd magaalada Muqdisho oo shaley dagaaladu ka dhaceen